Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » USwoop usungula iinqwelomoya ezintsha eziya ePalm Springs zisuka e-Edmonton
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
USwoop usungula iinqwelomoya ezintsha eziya ePalm Springs zisuka e-Edmonton.
Ukuzinikela kukaSwoop ku-Edmonton luphawu olucacileyo lokuba kukho ukuzithemba kwiSicwangciso soBuyiselo se-Alberta. Iindlela ezintsha ezinqumla eCanada ukuya ePalm Springs zivula amathuba anomdla kukhenketho kunye neshishini.
Ukonyuka koqhagamshelo kulo lonke elaseCanada nangaphaya ngeSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe sase-Edmonton kubalulekile kulo mmandla.
Ukukhula kwenkampani yeenqwelo moya kuya kubona amandla okubhabha kaSwoop kwikomkhulu laseAlberta esonyuka nge-76% xa kuthelekiswa namanqanaba angaphambi kobhubhane.
Ukwandiswa kwe-Swoop exhasa ukuyilwa kwemisebenzi eyongezelelekileyo eyi-140 eyongezelelekileyo kunye ne-spin off kunye ne-120 yezigidi zeedola eziqikelelweyo zemveliso yemveliso yezoqoqosho ngo-2022.
namhlanje, Swoop, i-airline yaseCanada ye-ultra-low fare airline, iphinde yaqinisekisa ukuzibophelela kwayo kwiNgingqi ye-Edmonton Metropolitan ngokubhengezwa kwenkonzo entsha kwi-US enye kunye neendawo ezisibhozo zasekhaya ezisuka kwi-Western Canadian base. Utyalo-mali olutsha olubalulekileyo lwenkampani yeenqwelomoya lubhiyozelwe ngale ntsasa ecaleni kokutyhilwa kweyona nqwelomoya intsha kaSwoop, eza kubhabha inegama elithi #Edmonton.
Ukukhula kwenkampani yeenqwelomoya kuya kubona SwoopUmthamo wokubhabha kwikomkhulu lase-Alberta wonyuke nge-76% xa kuthelekiswa namanqanaba obhubhane, ukuxhasa ukuyilwa kwe-140 yemisebenzi eyongezelelweyo ethe ngqo ne-spin-off kunye ne-120 yezigidi zeedola zemveliso yezoqoqosho ngo-2022.
“Esi sisiganeko esibalulekileyo Swoop njengoko sigxininisa ukuzinikela kwethu ekukhokeleni indlela yohambo lwenqwelomoya oluphantsi kakhulu eCanada kwaye siqinisekisa isikhundla sethu njengenkampani yenqwelomoya eneendawo ezininzi ezisuka e-Edmonton,” utshilo uCharles Duncan, uMongameli weSwoop. "Ngokujolisa ngamandla ukukhula kunye ne-Edmonton njengeqabane lethu, siza kuqhubeka nokubonelela abahambi bethu ngeenqwelomoya ezingayekiyo kunye namaxabiso aphantsi kakhulu ngelixa sixhasa ukubuyiswa kohambo lwaseCanada kunye noqoqosho lokhenketho."
Ukongezwa kweendawo ezisibhozo ezintsha zaseKhanada kwishedyuli yasehlotyeni yaseSwoop kuya kubona inkonzo engayekiyo ukusuka e-Edmonton ukuya eCharlottetown, eComox, eHalifax, eKelowna, eMoncton, eOttawa, eRegina naseSaskatoon.
I-Swoop iya kuba ngumthuthi wokuqala ukuzisa uqhagamshelwano olungayekiyo ukusuka kwiSikhululo seenqwelomoya saMazwe ngaMazwe sase-Edmonton ukuya eCharlottetown naseMoncton kunye neshedyuli yasehlotyeni yenkampani yomoya iya kubona ukubuyiselwa kwenkonzo eLondon, e-Ont.
Ukuqala nge-16 kaDisemba, ubukho be-Swoop obudlula umda bukhula ukusuka e-Edmonton ngokongezwa kwenkonzo entsha ukuya. Izixhobo zePalm. Inkonzo ecwangcisiweyo engayekiyo ukuya Izixhobo zePalm iya kusebenza kabini ngeveki.
Kelly Adams uthi:
Novemba 15, 2021 kwi-23: 12
Nceda uzikhuphe kubhaliso